RASMI: UEFA oo Ganaax dul dhigtay Cristiano Ronaldo kaddib dabaal degii Anshax xumada ahaa – Gool FM
(Europe) 21 Maarso 2019. UEFA ayaa ganaax dul dhigay xiddiga Juventus ee Cristiano Ronaldo kaddib dabaal degii anshax xumada ahaa uu sameeyay ciyaartii uu saddexleyda ka dhaliyay Atletico Madrid lugta labaad ee wareegii 16-ka Champions League.
Xiddiga reer Portugal ayaa u jawaabayay tababaraha Atletico Diego Simeone oo isla dabaal degaas xaniinyaha la qabsanayo sameeyay lugtii hore ay ku soo adkaadeen Madrid.
Waxaa la filayay in Ronaldo lagu ganaaxi doono lacag iyo inuu seego lugta hore ee wareega sideed dhammaadka CL ay la yeelanayaan Ajax, balse nasiib wanaag lacag bis ayaa lagu ganaax si la mid ah Simeone.
17,000 oo bound ayaa lagu ganaaxay laacibkii hore ee Real Madrid hayeeshee xor ayuu u yahay inuu ka soo muuqdo kulanka Ajax ee ka dhici doona Amsterdam 10-ka bisha Abriil.
"Waxaan eeganayaa oon isku dayayaa inaan gaaro heerkiisa oo kale.".